Xeeladaha Ikhtiyaariyada Maaliyadeed, Qeybta 1 | Maaliyadda Dhaqaalaha
Muddo ka hor waxaan ka wada hadalnay baloogga ku saabsan Ikhtiyaarada Maaliyadeed. Waxay yihiin qaabab kale oo maalgashi iyo / ama mala awaal ah oo laga heli karo suuqa saamiyada. Waxay yihiin qalab in waxay noqon kartaa mid aad u adag oo ay adag tahay in la fahmo, gaar ahaan kuwa maal -gashadayaasha ah ee hadda bilaabaya inay ku shaqeeyaan fasalka hantidaan. Qoraalkan waxaa loogu tala galay in uu noqdo dheereyn deris si loo fahmo xeeladaha kala duwan ee caadiyan loo isticmaalo ikhtiyaarrada maaliyadeed. Sababtan awgeed, haddii aadan garanayn sida ay u shaqeeyaan ama aad weli u shakisan tahay, waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso inaad marka hore akhrido waxa suuqa kala doorasho yahay. Aniguna aad ayaan ugu talinayaa… waxaa jira laba nooc oo iyaga ka mid ah, Wicitaannada, Gelitaanka waxayna labaduba noqon karaan iibsi iyo iibin labadaba. Amarka khaldan ee jihada aanan doonaynin si khalad ah, waxay u horseedi kartaa khasaare aan dhammaad lahayn.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad meel fog timid, oo aad damacsan tahay inaad sii waddo ku -biiridda suuqa ikhtiyaarrada, waxaan soo bandhigi doonaa 3 xeeladood oo leh ikhtiyaarro maaliyadeed oo hoose. Waxaan rajaynayaa inaad ku raaxaysan doonto qaar ka mid ah sidaan anigu sameeyo. Hadda waa markay arrimuhu aad u xiiso badan yihiin, oo isku mar isku murugsan yihiin, laakiin waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan karto. Fursaduhu waxay ahaayeen, yihiin oo jiri doonaan. Markaa ha degdegin inaad wax barato. Aan bilowno!
1 Istaraatiijiyada Wicitaanka ee Daboolan
1.1 Habka fulinta
1.2 Kiisaska fulinta kahor dhicitaanka
2 Istaraatiijiyad Dhigasho
3 Istaraatiijiyada Istaraatiijiyada
3.1 Dhex -dheer / Iibso
3.2 Kursiga Gaaban / Iibinta
Istaraatiijiyada Wicitaanka ee Daboolan
Istaraatiijiyada Wicitaanka La Daboolay, oo sidoo kale loo yaqaan Wicitaanka Daboolan ee Isbaanishka, ayaa ka kooban iibsashada saamiyada iyo iibinta ikhtiyaarka wicitaanka isla falalka. Ujeeddada ugu weyn ee lagu dabagalay istaraatiijiyadan ikhtiyaarrada leh ayaa ah uruurinta lacagta caymiska.
Tirada isla saamiyada ee saamiyada hoose ayaa ku jira ikhtiyaarka ama ikhtiyaarrada loogu talagalay in la iibiyo waa in la iibsadaa. Tusaale ahaan, haddii aad damacsan tahay inaad iibiso 2 ikhtiyaarrada Wicitaanka oo mid kastaa leeyahay 100 saamiyo hoose, ku -habboonaanta ayaa ah inaad iibsato 200 saamiyada qiimahaas ah. Sababta ugu weyni waxay tahay marka taariikhda dhicitaanku timaaddo, haddii saamiyadu ay ka sarreeyaan qiimaha shaqo -joojinta ee ikhtiyaarka, aad bay suurtogal u tahay in la fuliyo. Marka ikhtiyaarka la fuliyo, iibsaduhu wuxuu naga dalban doonaa iibiyayaal ahaan, saamiyada qiimaha lagu heshiiyay. Aynu aragno habka oo dhan si ka wanaagsan tusaale ahaan:
Waxaan leenahay saamiga lagu ganacsado € 20. Waxaana soo baxday inaan 00 oo saami ku leenahay shirkaddan aan dhowaan iibsanay (ama waqti dheer ka hor, xaqiiqadu waxay tahay inaan haysanno).
Waxaan go'aansannay inaan ku iibinno 2 ikhtiyaarrada Wicitaanka qiimo -dhimis ah 21 euro oo ah qiimaha ugu sarreeya ee 0 euro iyo bislaanshaha 60 bil.
Haddii saamiyadu hoos u dhacaan. Haddii ay dhacdo hoos u dhaca qiimaha saamiga, ikhtiyaarrada lama fulin doono sababtoo ah wax macno ah ma samayn doonto. Way fiicnaan lahayd haddii ay ahaan lahayd, waxaan iibin lahayn qaali! Si fudud, waxa dhici doona marka uu dhacayo waa in ikhtiyaarrada wicitaanka ee la iibiyey ay dhacayaan annaguna waxaan sidoo kale yeelan doonnaa qaddar aan dib u bixin lahayn. 0 x 60 = 200 euro ayaa guulaysatay.
Haddii saamiyadu kor u kacaan. Aynu qiyaasno in saamiyadu ay gaaraan 25 euro, waxaanna leenahay ikhtiyaarrada naga go'an 21 euro. Taasi waa khasaare 4 x 200 = 800 euro. Si kastaba ha ahaatee, annaga oo iibsanay saamiyadii, waxaan sidoo kale kasbannay farqigaas, sidaa darteed maahan inaan soo celinno, ugu yaraan si toos ah. Marka markay timaaddo maalinta dhicitaanka, ikhtiyaarka waa la fulin doonaa. Dakhliga ugu dambeeya wuxuu noqon lahaa 20 illaa 21, 1 euro saamiga kasta, oo lagu daray qiimaha 0 euro. Taasi waa, 60 x 1 = 60 euro.
Kiisaska fulinta kahor dhicitaanka
Xeeladaha ku jira ikhtiyaarrada maaliyadeed gudaheeda waxaa jira xaalado ikhtiyaarrada lagu fulin karo kahor dhicitaanka. Tani waxay la xiriirtaa haddii ay yihiin Ameerika ama Yurub. Kuwa Yurub waxaa la dili karaa oo keliya maalinta dhicitaankahalka Ameerikaanka maalin kasta. Taasi waa, haddii sabab kasta ha ahaadee iibsaduhu uu u arko inuu ka faa'ido badan yahay in la dilo mar hore, dhankeenna iibiyayaal ahaan waxaa waajib nagu ah inaan ku iibino saamiyada qiimaha shaqo joojinta kahor dhicitaanka. Tusaale ahaan waxay noqon kartaa in la qaybiyey saami qaybsiga intii hawlgalku socday. Iibsadaha Wicitaanku wuxuu arki doonaa saamiyadii oo qiimahoodu hoos u dhacay iyagoon ka faa'iideysan, sidaa darteed haddii lacagta caymiska ee la bixiyaa ay yar tahay, wuxuu aakhirka adeegsan karaa xuquuqdiisa.
Sidoo kale loo yaqaan Put Protectora oo Isbaanish ah, istaraatiijiyadan leh ikhtiyaarrada waxay ka kooban tahay iibsashada Put ee lahaanshaha boos iibsi ee saamiyada. Sidan, haddii aan aaminsanahay in qiimaha aan leenahay uu yahay mid xoog badan, laakiin waxaa laga yaabaa inay hoos u dhacdo hoos u dhac iyo waxaan rabnaa inaan iska ilaalino dhicitaannada, istaraatiijiyadani waa mid ku habboon. Sidan, waxaan xaq u leenahay inaan fulinno ikhtiyaarka Put si aan u awoodno inaan ku iibinno saamiyadeena taariikhda dhicitaanka qiimo sare haddii ay dhacdo hoos -u -dhacyadu inay dhacaan.
Istaraatiijiyada Straddle waa mid ka mid ah xeeladaha leh ikhtiyaarrada maaliyadeed halkaas oo aan looga baahnayn inay iibsato saamiyada. Qaybta togan ee istaraatiijiyadan ayaa ah inaan fulin karno ilaa inta aan ka fiirsanayno inaan haysanno sabab aan ku rumaysanno inay jiri doonto isbeddel badan ama yar. Tan darteed, waxaa jira laba nooc oo Straddle ah, mid dheer (ama la iibsaday) iyo mid gaaban (ama la iibiyay)
Dhex -dheer / Iibso
Straddle ee Iibsigu wuxuu ka kooban yahay iibsiga isku mar, isla qiimaynta shaqo joojinta, iyo isla taariikhda uu dhacayo ee ikhtiyaarka Wicitaanka iyo ikhtiyaar kale oo Put. Kala duwanaansho ayaa sidoo kale soo bixi kara, sida in laga soo iibsado lacagtii sidaasna lagu yareeyo qiimaha lacagta caymiska.
Istaraatiijiyadan waxaa la adeegsadaa marka loo tixgeliyo inay jiri doonto isbeddel badan oo qiimuhu wuxuu u jihaysan doonaa xagga sare ama xagga hoose, laakiin aan la garanayn. Haddii ay hoos u dhacday, ikhtiyaarka Put ayaa dib u qiimeyn doona, halka haddii ay kor u kacdo, waxay noqon doontaa ikhtiyaarka Wicitaanka oo kordhin doona qiimaha. Markaa saadaasha la filayo ayaa ah in qiimuhu u jihaysto xoog badan.
Qiimaha hawlgalkan ayaa ah qiimaha labada nooc ee ikhtiyaarrada, sidaa darteed xaaladda ugu xun waxay noqon doontaa in qiimaha saamigu uu ahaado mid aan dhaqdhaqaaq lahayn taariikhda dhicitaanka. Waxaan lumin lahayn lacagta caymiska iyada oo ay yar tahay suurtogalnimada in aan soo jiidanno.
Kursiga Gaaban / Iibinta
Straddle for Sale wuxuu ka duwan yahay kii hore, the iibinta isku mar ee Wicitaanka iyo xulashada Put isla taariikhda dhicitaanka iyo qiimaha shaqo joojinta. Waxaa ka mid ah xeeladaha leh ikhtiyaarrada maaliyadeed, tani waa midda ugu halista badan. Caadiyan, lacagta caymiska ayaa la filayaa in la soo dallaco halka isbedelka ugu yar ee qiimaha hoosta la filayo. Si kastaba ha ahaatee, dhacdada ugu xun waxay noqon doontaa dhaqdhaqaaq qiimo aad u xoog badan oo dhinac ka ah. Tani waxay u tarjumi doontaa khasaare aad u weyn haddii tani dhacdo. Shaqsi ahaan, weligay ma adeegsan istaraatiijiyadan, sababtoo ah halista ay leedahay. Wixii aan tan u kashifayo habka loo isticmaalo ujeedooyin waxbarasho oo ka badan talo ahaan.
Haddii aad xiisaynayso inaad sii waddo inaad ku sii qoto dheeraato xeelado cusub oo leh ikhtiyaarro maaliyadeed iyo qaar ka sii adag, ma seegi kartid qaybta labaad!
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Bolsa » Xeeladaha Ikhtiyaariyada Maaliyadeed, Qeybta 1
Soo kabashada dhaqaalaha